Ukubuka Okwezwe | Phaphama! January 2014
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Ukraine IsiBhunu IsiBulgaria IsiCebuano IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLithuania IsiLozi IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMalta IsiMyanmar IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPangasinan IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiQuechua (Sase-Ayacucho) IsiQuechua (SaseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiThai IsiTigrinya IsiTonga IsiTsonga IsiTswana IsiTurkey IsiTwi IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu
Amazwe Ase-Afrika Eseningizimu YeSahara
“Zingamaphesenti angu-38 kuphela izingane ezineminyaka engaphansi kwemihlanu ezinezitifiketi zokuzalwa,” kusho umbiko we-UNICEF ngokuphathelene namazwe ase-Afrika eseNingizimu yeSahara. Kodwa, kwezinye izindawo kulawo mazwe, “izitifiketi zokuzalwa zibalulekile ukuze izingane zithole ukunakekelwa kwezempilo nemfundo, nokuba izintandane zikwazi ukuthola ifa elishiywe abazali bazo,” kusho u-Elke Wisch, oyisekela lomqondisi we-UNICEF engxenyeni ye-Afrika esempumalanga neseningizimu.
Enye inhlolo-vo yaveza ukuthi, into eyesatshwa kakhulu yintsha yase-Italy ukuhlukunyezwa ngezinye izingane nge-Internet. Phakathi kwentsha eneminyaka engu-12 kuya kwengu-17, ingamaphesenti angu-72 esaba lolu hlobo lokuhlukunyezwa. Iyinani elikhulu kunaleyo eyesaba izidakamizwa (engamaphesenti angu-55), naleyo eyesaba ukunukubezwa umuntu omdala (engamaphesenti angu-44), noma leyo eyesaba ukuthola isifo esithathelwana ngocansi (engamaphesenti angu-24).
Njengoba kwabikwa kuyi-Japan Times, liyanda inani labantu abasebasha eJapane elenqabayo ukukhushulelwa esikhundleni esiphakeme emsebenzini. Abangamaphesenti angu-40 bakhala ngokuntuleka kwesimilo nokwanda kwezenzo zokungathembeki. Izisebenzi eziningi zizithola zingakwazi ukuveza imibono yazo noma ukukhuluma ngenkululeko nalabo abaziphethe. Nakuba isizukulwane esesikhulile sinamathela ngokwethembeka kubaqashi baso, abasha abangamaphesenti angu-60 manje sebemane baqhubeke nje nomsebenzi kuze kube yilapho bethola ongcono.
Kusukela ngo-1980 kuya ku-2010, bacishe babe ngu-800 000 abantu ababulawa ngezibhamu eBrazil. Izisulu ezingaphezu kuka-450 000 zazineminyaka ephakathi kwengu-15 nengu-29 ubudala. Ucwaningo lwamacala amuva lwembula ukuthi lokhu kubulawa kwabantu ngokuvamile kubangelwa izingxabano zasekhaya, ukuxabana nomakhelwane, umona noma ukuhilizisana phakathi kwabashayeli bezimoto.
Ukubuka Okwezwe—January 2014